လူမှုအဖွဲ့အစည်း - Goethe-Institut
ဂျာမန်မြို့တော်များသည် သူတို့ကိုဝန်းရံလျှက်ရှိသော မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ရှုမျှော်ခင်းများ အမျိုးမျိုးအထွေထွေကွဲပြားလျှက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စီးရီး၏မြို့တော်ကောက်ကြောင်းများတွင် ဂိုသေး (Goethe) ၏မွေးရပ်နိုင်ငံ တစ်နံတစ်လျားခရီးတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ထွက်ခွာကြည့်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးရှင်များက မည်သည့်အရာများက သူတို့၏မြို့များကို အများနှင့်မတူ တမူထူးခြား နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းစေသည်ကို သေးသေးကြီးကြီးအရာများအားလုံးသို့ အနီးကပ်မြင်ကွင်းတစ်ခု ဆောင်ယူလာပြပါမည်။
“စီးပါစေ့ရေ” နှင့် ရေပေါ်စိုက်ခင်းတစ်ခု
ကမ္ဘာတဝှန်းတွင် မြို့များပေါ်ထွန်းလာကြရာ သောက်ရေ ပိုမိုလိုအပ်လာမှုသည်လည်း ၄င်းတို့နှင့်အတူ တိုးပွားလာနေသည်။ ဤတွင် ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သော ရေစီမံခန့်ခွဲရေး ပြုလုပ်ရန် အတွက် စိတ်ကူးအချို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကိုစားလို့ဖြစ်သေးလား။ ဒါမှမဟုတ် စွန့်ပစ်လိုက်ရတော့မလား။
ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ်အစားအစာတန်ချိန် ၁၃ သန်းနီးပါးသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြစ်ကုန်ကြသည်။ အစားအစာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက သက္ကရာဇ် ၂၀၃၀ ၌ ပြည်တွင်းအစားအစာစွန့်ပစ်မှု ထက်ဝက်ဖြစ်အောင် ကြီးမားသော ရည်မှန်းချက် အစီအမံများရှိသည်။ ဤပြဿနာကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်းကလည်း ကနဦးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေပါပြီ။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း နှင့် ကိုလိုနီဝါဒသစ်
လွှမ်းမိုးမှုပုံစံသစ်အဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာသည့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာကိုလိုနီဝါဒ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာများသည် ကမ္ဘာမြေမှ လက်ဆောင်ပေးထားသည့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များဖြစ်ပါသည်။ ချမ်းသာသောစက်မှုနိုင်ငံများသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကိုခေါင်းပုံဖြတ်၍ အကျိုးအမြတ်များရရှိနေကြသည်။
နွေရာသီတွင် အလုပ်လုပ်တယ် _ ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းရွက်အပင်ပျိုးဥယျာဉ်မှူး
ဆေးဖက်ဝင်အပင်မှန်း လူတွေ နားလည်နိုင်ဖို့ သင့်ပါတယ်။
နွေရာသီဟာ Heidi Knappရဲ့ ဆိတ်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ ပျိုးဥယျာဉ်ထဲမှာ အလုပ်အများဆုံးအချိန်ပါ။ အပင်လေး‌တွေကို ခူးယူစုဆောင်းကြ၊ ချက်ကြပြုတ်ကြ၊ အံ့ဩမှင်သက်မိကြနဲ့ပေါ့။ Wegerich, Waldmeister & Co ထဲမှာ ဘာတွေရှိနေမလဲဆိုတာ ဘယ်သူက သိရှိနိုင်ပါ့မလဲ။
အသနားခံစာများကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်း၊ ကိုယ်နေထိုင်ရာအရပ်ရှိ ရေကူးကန်သို့သွားရောက်လို၍ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း၊ အိမ်တွင်စာသင်ခြင်း စသည့် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကို ယနေ့ခေတ်တွင် ဒီဂျစ်တယ်နည်းအရ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်မရသောသူများ သို့မဟုတ် ဒီဂျစ်တယ်စွမ်းရည် အကန့်အသတ်ရှိသောသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် ဘေးဖယ်ခံထားရနိုင်ပါသည်။
ပြတိုက်နှင့်မော်ကွန်းတိုက်များတွင် လာရောက်ကြည့်ရှုသူများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် မှောင်မဲနေသောပြခန်းများ၏ မှန်ဗီရိုများမှတဆင့်သာ အနုပညာလက်ရာများကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပေသည်။ ယခုဆိုလျင် ၎င်းလက်ရာများကို ပိုမိုထိတွေ့ခံစားနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ “ဒါဗင်ချီ Coding” Culture Hackathon” ကျေးဇူး ဖြင့် ပြတိုက်အသီးသီးမှ အဖိုးတန်လက်ရာများ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် မည်သို့အသက်ဝင်လာသည်ကို တွေ့ရှိခံစားနိုင်ပေမည်။
A frontrunner in preservation
Germany is set to have the largest collection of computer games in the world. Over 50,000 titles of individual collections are to be documented with the support of government funding, and then pooled together.
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ကျွန်ုပ်တို့ဘဝတွေကို ဘယ်လိုမျိုး ပြောင်းလဲပစ်နေတာလဲ။
SARS-CoV-2 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် နွေဦး ပေါက်အချိန်ကတည်းက ကမ္ဘာကြီးကို ရပ်တန့် ထိန်းချုပ်ပစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝများကို ထင်ထင်ရှားရှား ပြောင်းလဲမှုများက ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကို နှေးကွေးသွားစေလိမ့်မည်ဟု ယူဆထားခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ လူ့အဖွဲ့ အစည်း၏ အချို့နေရာများအပေါ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သက်ရောက်မှုသည် တာရှည်သွားနိုင်သည်။ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာမှုတို့ကို ယခုအချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့နေကြသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးတို့၏ အရာထင်မှု။
ကိုရိုနာအကြပ်အတည်းကာလအတွင်း ကန့်သတ်ချက်စည်းမျဉ်းများသည် မှန်ကန်သလားဟူသော ဆက်လက်ငြင်းခုန်စရာစကားစစ်ထိုးပွဲသည် ဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်အစိုးရများက ချမှတ်သော ဇီဝနိုင်ငံရေးအဆုံးအဖြတ်များရှိ အားနည်းချက်ကိုထင်ရှားစေသည်။ သမိုင်းပညာရှင်များဖြစ်ကြသော Hedwig Richter နှင့် René Schlott တို့က ဒီမိုကရက်တစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးဆက်များကို ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးကြသည်။
“အဲဒါကြောင့် သင့်မျက်နှာထက်က အပြုံး ပျက်သွားလိမ့်မယ်။”
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကိုရိုနာက ပြီးပြည့်စုံသော မုန်တိုင်းတစ်လုံးဖြစ်လာကာ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကို ဆုံးရှုံးရမည့်အရေးကို ကြောက်ရွံ့လာသောအခါ လျှို့ဝှက်ပူးပေါင်း ကြံစည်ချက်သဘောတရားများအပေါ် လူများက ပို၍သဘောထားပျော့ပြောင်းလာကြသည်။လျှို့ဝှက်ပူးပေါင်းကြံစည်ချက်အယူအဆ သီအိုရီများကို လက်ခံထားသော လူများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါ မည်သို့တုန့်ပြန်သင့်ကြောင်းကိုနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်နှင့် အင်တာနက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Katharina Nocun က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင် ရှင်းလင်းပြောကြားထားသည်။
ကျား၊မ လိင်အင်္ဂါ မကွဲပြားမှု
၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းမှစ၍ ဂျာမန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရာတွင် တတိယမြောက် လိင်အမျိုးအစားဖြစ်သော "ထွေပြား" ( divers ) ကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ထိုရွေးချယ်မှုက ကျား၊မဖြစ်ကြောင်း အတိအကျခွဲခြားမသတ်မှတ်နိုင်ပဲ မွေးဖွားလာသည့် ကလေးများ၏ မိခင်ဖခင်များ အနေဖြင့် လိင်ထွေပြားသူ ကလေးငယ်၏ အနာဂတ်အပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ဖယ်ရှားရန် နှင့် မတူကွဲပြားခြင်းဟာလည်း ပုံမှန်သာ ဖြစ်ကြောင်း ပြသရန် ရည်ရွယ်ချက် နှစ်ချက် ရှိသည်။
မနေ့ နှင့် ယနေ့
ဂျာမန်လေးဦးလျှင်တစ်ဦး၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ အမေရိကန်နှစ်ဦးလျှင် တစ်ဦးသည် Podcast များကို နားထောင်ကြသည်။ ဘယ်အရာက အသံအစီအစဉ်ကို အလွန်လူကြိုက်များစေသလဲ။ ဂျာမန်စကားပြော Podcast လောကတွင် မည်သူတို့ပါဝင်သလဲ။
ကိုလိုနီခတ်က ရှေးလူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းကို ဖြည်းဖြည်းချင်းသာ ဆောက်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
မည်သူပိုင်ဆိုင်ပါသလဲ။ ကိုလိုနီခေတ်မှ ယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းများကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်‌တောင်းဆိုချက်များက မကြာခဏဆိုသလို အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်လာပြီး တတ်နိုင်သမျှ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်ညှိုနှိုင်းမှုများက အမြဲလိုလို ခက်ခဲနေပြီး ကြန့်ကြာနေပါသည်။ ထို့အတွက် ဂျာမနီနိုင်ငံက ပထမခြေလှမ်း ကိုလှမ်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ရိုမန်နီက ရိုမားလူမျိုးတို့ရဲ့ ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး စကားလုံးအများစုက အိန္ဒိယမှဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရိုးမားလူမျိုးတွေ ဥရောပသို့ ပြောင်းရွှေ့ကြတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ ရိုမန်နီ ဘာသာစကားက ဥရောပဘာသာစကားများစွာနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့ပြီး အပြန်အလှန်လွှမ်းမိုးမှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဂရိနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံတို့မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။